ဒီအချိန်ဟာ ဗန်ဒီဘိခ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ အရေးကြီးဆုံးအချိန်၊ အသင်းမှာဆက်ပြီးနေမလား..? အသင်းပြောင်းဖို့ စဉ်းစားတော့မလား…? – MAN U FAN CLUB
November 25, 2021 Kaung Thant Articles 0
ဗန်ဒီဘိခ်ကို အသင်းပြောင်းကစားဖို့တစ်ချိန်လုံး ပြောနေတဲ့ ဗန်ဒါဘတ်အတွက်တော့ ဒီအချိန်ဟာ အကွက်ဝင်လာပြန်ပြီလို့ဆိုရမှာပါပဲ။
ဆိုးလ်ရှား လက်ထက်မှာ အသင်းရဲ့ အရံခုံမှာတင် အချိန်ကုန်ခဲ့ရတဲ့ နယ်သာလန်ကြယ်ပွင့်ဟာ ဆိုးလ်ရှား နည်းပြခဲ့တဲ့
နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ ဝက်ဖို့ဒ် အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းက ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ ဒုတိယပိုင်းမှာ လူစားဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ကာသွင်းဂိုးတစ်ဂိုးရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက သူ့ကို ပွဲထွက်ခွင့်ရလာဖို့မျှော်လင့်လာခဲ့သလို ယာယီနည်းပြ ကာရစ်ကလည်း သူကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲမှာ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ယာယီနည်းပြ ကာရစ်ဟာ ဘရူနို ကိုချန်လှပ်ထားခဲ့ပြီး ဗန်ဒီဘိခ်ကို ပွဲထုတ်ခဲ့ပေမယ့် သူဟာ ချိတ်ဆက် ကစားရမယ့် သူတွေနဲ့ နားလည်မှုမရရှိခဲ့ပဲ ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ဘရူနိုနဲ့ လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း နယ်သာလန်အသင်းရဲ့ စီနီယာကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဗန်ဒါဗတ်က ဗန်ဒီဘိခ်အနေနဲ့ လာမယ့်ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ကျရင် ယူနိုက်တက်အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ စဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုပြီး ထပ်မံ တိုက်တွန်းလာပါတယ်။
ဗန်ဒါဗတ်က “ယူနိုက်တက်အသင်းကနေ ဗန်ဒီဘိခ်ထွက်သင့်လားလို့မေးလာရင် ကျွန်တော်ကတော့ ‘Yes’လို့ပဲ ဖြေမိမှာပါ။
သူက ယူနိုက်တက်အသင်းမှာတော့ ဒီထက်ပိုပြီး ဘာမှဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူး။
ဒါမှမဟုတ် သူ့အသင်းဟောင်း အေဂျက်စ်အသင်းဆီကိုသာ ပြန်သွားဖို့သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်”ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗန်ဒီဘိခ်ကတော့ ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့ ပွဲမှာ လူစားလဲခံခဲ့ရပေမယ့် ဆန်ချိုဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ချိန်မှာ သူကလည်း ဆန်ချိုနဲ့အတူအောင်ပွဲခံခဲ့တာကြောင့်
သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ သရဲနီတစ်ယောက်ရဲ့ DNA တွေရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကော ဗန်ဒီဘိခ်ရဲ့နေရာမှာဆိုရင် ဘယ်လိုစဉ်စားမလဲ…?
အသင်းမှာဆက်ပြီးနေမလား..? အသင်းပြောင်းဖို့ စဉ်းစားတော့မလား…?
ဒီအခ်ိန္ဟာ ဗန္ဒီဘိခ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ အေရးႀကီးဆုံးအခ်ိန္၊ အသင္းမွာဆက္ၿပီးေနမလား..? အသင္းေျပာင္းဖို႔ စဥ္းစားေတာ့မလား…?
ဗန္ဒီဘိခ္ကို အသင္းေျပာင္းကစားဖို႔တစ္ခ်ိန္လုံး ေျပာေနတဲ့ ဗန္ဒါဘတ္အတြက္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္ဟာ အကြက္ဝင္လာျပန္ၿပီလို႔ဆိုရမွာပါပဲ။
ဆိုးလ္ရွား လက္ထက္မွာ အသင္းရဲ႕ အရံခုံမွာတင္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရတဲ့ နယ္သာလန္ၾကယ္ပြင့္ဟာ ဆိုးလ္ရွား နည္းျပခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆုံးပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ဝက္ဖို႔ဒ္ အသင္းနဲ႔ကစားခဲ့တဲ့ပြဲတုန္းက ဗန္ဒီဘိခ္ဟာ ဒုတိယပိုင္းမွာ လူစားဝင္ကစားခြင့္ရခဲ့ၿပီး ေျခစြမ္းျပကစားႏိုင္ခဲ့ကာသြင္းဂိုးတစ္ဂိုးရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြက သူ႔ကို ပြဲထြက္ခြင့္ရလာဖို႔ေမွ်ာ္လင့္လာခဲ့သလို ယာယီနည္းျပ ကာရစ္ကလည္း သူကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ဗီလာရီးရဲလ္နဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲမွာ ပြဲထြက္ကစားခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယာယီနည္းျပ ကာရစ္ဟာ ဘ႐ူႏို ကိုခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၿပီး ဗန္ဒီဘိခ္ကို ပြဲထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ သူဟာ ခ်ိတ္ဆက္ ကစားရမယ့္ သူေတြနဲ႔ နားလည္မႈမရရွိခဲ့ပဲ ဒုတိယပိုင္းမွာေတာ့ ဘ႐ူႏိုနဲ႔ လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း နယ္သာလန္အသင္းရဲ႕ စီနီယာကစားသမားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗန္ဒါဗတ္က ဗန္ဒီဘိခ္အေနနဲ႔ လာမယ့္ဇန္နဝါရီအေျပာင္းအေ႐ႊ႕က်ရင္ ယူႏိုက္တက္အသင္းကေန ထြက္ခြာဖို႔ စဥ္းစားသင့္တယ္ဆိုၿပီး ထပ္မံ တိုက္တြန္းလာပါတယ္။
ဗန္ဒါဗတ္က “ယူႏိုက္တက္အသင္းကေန ဗန္ဒီဘိခ္ထြက္သင့္လားလို႔ေမးလာရင္ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ‘Yes’လို႔ပဲ ေျဖမိမွာပါ။ ဗန္ဒီဘိခ္ဟာ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္
သူက ယူႏိုက္တက္အသင္းမွာေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီး ဘာမွျဖစ္လာဖို႔မရွိပါဘူး။ သူ႔ကစားဟန္နဲ႔ကိုက္တဲ့ ဂ်ာမန္ကလပ္တစ္သင္းသင္းကိုေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔အသင္းေဟာင္း ေအဂ်က္စ္အသင္းဆီကိုသာ ျပန္သြားဖို႔သင့္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါတယ္”ဆိုၿပီးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဗန္ဒီဘိခ္ကေတာ့ ဗီလာရီးရဲလ္နဲ႔ ပြဲမွာ လူစားလဲခံခဲ့ရေပမယ့္ ဆန္ခ်ိဳဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ သူကလည္း ဆန္ခ်ိဳနဲ႔အတူေအာင္ပြဲခံခဲ့တာေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကိုခ်စ္တဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ သရဲနီတစ္ေယာက္ရဲ႕ DNA ေတြရွိေနတယ္လို႔ယူဆရပါတယ္။
ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ေကာ ဗန္ဒီဘိခ္ရဲ႕ေနရာမွာဆိုရင္ ဘယ္လိုစဥ္စားမလဲ…?
အသင္းမွာဆက္ၿပီးေနမလား..? အသင္းေျပာင္းဖို႔ စဥ္းစားေတာ့မလား…?
The post ဒီအချိန်ဟာ ဗန်ဒီဘိခ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ အရေးကြီးဆုံးအချိန်၊ အသင်းမှာဆက်ပြီးနေမလား..? အသင်းပြောင်းဖို့ စဉ်းစားတော့မလား…? appeared first on .
ပီအက်စ်ဂျီထက် မန်ယူနဲ့ဆို ပိုချက်တီနို ပိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ အင်္ဂလန် လင်းမူ ပြောပြီ